1. Ngosipụta nke saịtị ahụ.
N'okpuru Nkeji edemede 6 nke 2004 June 575 21 Iwu 2004-XNUMX maka Nkwenye na Economy Digital, o doro anya na ndị ọrụ nke saịtị ahụ www.comme-un-pro.fr ndi mmadu di iche iche di iche iche bu otu n'ime mmejuputa na nlekota oru:
ọrụ n'akwụkwọ : Tranquillus -tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Onye nchịkọta akụkọ ahụ bụ onye mmadụ .
usu : WP SERVER SARL, ụlọ ọrụ etinyere n'okpuru iwu French nwere isi obodo nke € 10000, na-ahọpụta ụlọ obibi na 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes, debara aha na RCS nke Nîmes n'okpuru nọmba 808 840 474, nọmba VAT FR86808840474, nke onye njikwa iwu ya bụ Fabrice Ducarme nọchiri anya ya.
2. Ọnọdụ niile nke saịtị na ọrụ ndị a na-enye.
Iji saịtị comme-un-pro.fr egosi nnweta zuru oke nke usoro na ọnọdụ ndị a kọwara n'okpuru. Enwere ike imezi ma ọ bụ gbakwunye ọnọdụ ndị a n'oge ọ bụla, a na-akpọ ndị ọrụ nke saịtị ahụ ịgakwuru ha mgbe niile.
saịtị comme-un-pro.fr na-eji ụzọ niile o nwere iji hụ na a pụrụ ịdabere na ya ma dịka o kwere mee. Otú ọ dị, njehie ma ọ bụ hapụ nwere ike ime. Onye oru ntanetị gha agha ihu na izi ezi nke ozi ya nke enyere maka ozi naanị, anaghị agwụ ike ma nwee ike ịgbanwe ma ọ bụ gbasaa na-enweghị ọkwa.
Comme-un-pro.fr ọ dịghị ụzọ ọ bụla a ga-esi jiri ihe ọmụma a mee ihe, yana mmebi ọ bụla ma ọ bụ nke ọ bụla nke nwere ike ịkpata.
Cookies : Comme-un-pro.fr saịtị ahụ nwere ike ịjụ gị ka ị nabata kuki maka mgbasa ozi, ọnụ ọgụgụ na ebumnuche ngosi. Kuki bụ ozi etinye na draịvụ ike gị site na ihe nkesa nke saịtị ị na-aga na nke enwere ike iji soro gị. O nwere ọtụtụ data echekwara na kọmputa gị na faịlụ dị mfe nke sava na-enweta iji gụọ ma chekwaa ozi. Akụkụ ụfọdụ nke saịtị a enweghị ike ịrụ ọrụ na-enweghị nnabata kuki.
Ihichapụ kuki arụnyere na kọmputa gị, ebe a bụ ozi peeji nke isi nchọgharị:
Njikọ njikọ hyperpertext: Comme-un-pro.fr nwere ike inye njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị na Ịntanetị. Comme-un-pro.fr anaghị aza maka ma ọ bụ kwenye na saịtị na isi mmalite ndị dị. Enweghị ike ijide ya maka mmebi nke ụdị ọ bụla ma ọ bụ ihe sitere na ọdịnaya nke saịtị ndị a ma ọ bụ isi mmalite, tinyere ozi, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-enye, ma ọ bụ ihe ọ bụla a pụrụ ime ihe ndị a. Ihe ize ndụ metụtara ọrụ a bụ ọrụ zuru oke nke onye ọrụ, onye ga-agbaso ọnọdụ ọnọdụ ha.
Ịnweta: A na-emelite saịtị ahụ n'oge dị iche iche n'afọ, mana enwere ike ịme ka ọ ghara ịdị. Ọ bụrụ n’ịhụta oghere, mperi ma ọ bụ ihe dị ka adịghị arụ ọrụ, biko mee ka ọ mara ya email, na adreesị tranquillus.france@comme-un-pro.fr, na-akọwa nsogbu ahụ n'ụzọ zuru oke dị ka o kwere mee (nsogbu dị na peeji nke, ụdị kọmputa na ihe nchọgharị eji, ...).
Ihe ọ bụla ebudatara ọdịnaya bụ ihe ize ndụ nke onye ọrụ na n'okpuru naanị ọrụ ya. N'ihi ya, comme-un-pro.fr enweghi ike ijide ya maka mmebi ọ bụla nke kọmputa onye ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-akpata data sitere na nbudata. Tụkwasị na nke ahụ, onye ọrụ nke saịtị ahụ kwenyere ịnweta saịtị ahụ na-eji ngwa ndị na-adịbeghị anya, enweghị nje virus na ntanetị emetụ emelitere.
Ihe omuma ihe omuma:
Ọdịnaya niile nke saịtị a comme-un-pro.fr, gụnyere, ma ọ bụghị nanị na, ndịna-emeputa, ihe oyiyi, ederede, vidiyo, mmemme, ụda, logos, gifs na akara ngosi na nhazi ha bụ naanị ihe onwunwe nke saịtị ahụ comme-un-pro.fr ma e wezụga ụghalaahia, logos ma ọ bụ ọdịnaya nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị edemede.
Ntinye ọ bụla, nkesa, mgbanwe, mmegharị, retransmission ma ọ bụ mbipụta, ọbụna ele mmadụ anya n'ihu, nke ihe ndị a na-emechibidoro iwu n'enweghị nkwekọrịta nkwenye doro anya nke comme-un-pro.fr. Ngosipụta ma ọ bụ mmepụta nke a, n'ụzọ ọ bụla, ọ bụ mmejọ nke Akwụkwọ Isiokwu L.335-2 na-agbaso na ịgbaso Usoro nke Akụrụngwa Intellectual Property. Inweghị ike imegide iwu a bụ mmebi iwu nke nwere ike ibute iwu obodo na nke omempụ nke onye na-emegide iwu. Tụkwasị na nke a, ndị nwe ọdịnaya nwere ike iburu gị iwu.
Nkwupụta na CNIL:
Dị ka 78 17-iwu nke January 6 1978 (emeziri site 2004-801 6 iwu nke August 2004 na nchedo nke ndị mmadụ n'otu n'otu banyere nhazi nke onwe onye data) metụtara data, faịlụ na ohere, saịtị a bụ isiokwu nke a nkwupụta (nọmba 2169132) gaa na Ụlọ Ọrụ Mba Na-ahụ maka Nkọwapụta na Nhọrọ (Ihe Ntuzi Na -www.cnil.fr).
Na mkpokọta, ịchọghị ka ị nye anyị data nkeonwe gị mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị.
Otú ọ dị, ụkpụrụ a nwere ụfọdụ. N'ezie, maka ọrụ ụfọdụ nke saịtị anyị na-enye, ị nwere ike ịchọrọ ịnye anyị data dịka: aha gị, ọrụ gị, aha ụlọ ọrụ gị, adreesị ozi-e gị, na nọmba ekwentị gị. Nke a bụ ikpe mgbe i mejupụtara ụdị e nyere gị online, na mpaghara " kọntaktị ".
N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike ịjụ ịnye data nkeonwe gị. N'okwu a, ị gaghị enwe ike iji ọrụ saịtị ahụ, dịka ịrịọ ozi, ma ọ bụ ịnweta akwụkwọ akụkọ.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịnakọta ozi ụfọdụ na-akpaghị aka banyere gị n'oge igodo dị mfe na weebụsaịtị anyị, gụnyere: ozi gbasara iji saịtị anyị, dịka ebe ị gara na ọrụ ị nweta, adreesị gị IP, ụdị ihe nchọgharị gị, oge ịnweta gị.
Anyị na ndị mmekọ anyị na-eji ozi dị otú ahụ maka ebumnuche mgbasa ozi, ọnụ ọgụgụ dị n'ime, iji melite ogo nke ọrụ enyere gị. A na-echekwa ọdụ data ndị a site na ndokwa nke iwu nke July 1, 1998 na-etinye Iwu 96/9 nke March 11, 1996 na nchekwa iwu nke ọdụ data.
Dị na 38 na-esonụ nke 78 17-iwu nke January 6 1978 metụtara data, faịlụ na ohere, ọ bụla onye ọrụ nwere ikike ohere, rectification, kagbuo na mmegide na data onwe onye banyere ya.
Iji mee ihe ziri ezi, zigara arịrịọ gịomme-un-pro.fr site na email: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Ọ nweghị ozi nke onye ọrụ nke saịtị ahụ comme-un-pro.fr edepụtara na-enweghị ihe ọmụma nke onye ọrụ, gbanwere, wefe, kenye ma ọ bụ ree ya na nkwado ọ bụla na ndị ọzọ. Naanị echiche nke mgbapụta nke saịtị ahụ comme-un-pro.fr na ikike ya ga-ekwe ka nnyefe nke ahụ kwuru ozi nye onye nwere ike ịzụta ya nke ga-ejikọkwa ya na otu ọrụ iji chekwaa ma gbanwee data gbasara onye ọrụ nke saịtị ahụ comme-un-pro.fr.
Ọnọdụ dị ugbu a nke saịtị ahụ comme-un-pro.fr na-achịkwa iwu French na esemokwu ọ bụla ma ọ bụ ịgba akwụkwọ nke nwere ike ịpụta site na nkọwa ma ọ bụ mmegbu nke ndị a ga-abụ nanị ikike nke ụlọ ikpe ndị France, a na-enye ya naanị ikike ụlọ ikpe ndị dị na Paris. Asụsụ ederede maka nhazi nke esemokwu esemokwu bụ French.